Modafinil: ငါဘယ်လို Modafinil အမှုန့်ကိုယူသင့်သနည်း | Steroid တစ်မျိုးအမှုန့် AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/modafinil/Modafinil: ငါဘယ်လို Modafinil အမှုန့်ကိုယူသင့်သနည်း
အပေါ် Posted 10 / 30 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil. ဒါဟာရှိပါတယ်3မှတ်ချက်.
modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့် နိုးနိုးကွားကွားအားပေးအားမြှောက်မယ့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်, narcolepsy, ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ်ကုသရန်အသုံးပြုသည်။
ဘယ်လိုလဲ does Modafinil လုပ်ငန်းခွင်?
သငျသညျနိုးစောင့်ရှောက်: Modafinil တဦးတည်းအရာလုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့ကျယ်ပြန့်သတ်မှတ်မတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကို Tim Ferriss ထံမှ Dave Asprey ဖို့သမ္မတအိုဘားမားမှလူတိုင်းအတွက်မှာ Modafinil ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဖြစ်ကောင်းကြားဖူးတယ် အချို့သော အမှတ်။
လုပ်ငန်းရှင်များ, ဆရာဝန်တွေ, ပရိုဂရမ်မာများနှင့်ငါသိရုံအကြောင်းကိုလူတိုင်း Modafinil အကြောင်းကိုကြားသိဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုအသုံးပြုထားသည်။
သို့သျောလညျးက၎င်း၏ကြီးထွားလာအယူခံဝင်ပေမယ့်လူအနည်းငယ်သိကြ ဘယ်လို Modafinil အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်.
ဒါက 1) Modafinil အသုံးပြုမှုအများဆုံးအဲဒါကိုသာအချိန်ပိုမိုလူကြိုက်များရသွားရဲ့) အိန္ဒိယနှင့်2အတွက်ကျပန်းဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်လုပ်မယ့်အဓိပ္ပာယ် Off-တံဆိပ်ကြောင်းပေးထား, အသေးစားပြဿနာပါပဲ။
အများဆုံးကျန်းမာလူတို့အဘို့, modafinil ၏ 30-50 မီလီဂရမ်ပဒေသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ 6-8 နာရီကြာ; အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမရှိဘဲ, နံနက်ယံ၌ကယူပါ။ ငါ modafinil တစ်ကြောင်းပြောသင့် ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေး; သငျသညျအကွောငျးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းကရနိုင်သောနေရာများရှိပါသည်; ငါရှိသောကြောင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များသူတို့အားလင့်ထားသည်ချင်ကြပါဘူး ... ဒါပေမယ့်သင်ကအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပေမည်။ သင်တန်း၏, တာဝန်သိ Biohack ။
သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျအဖြစ် modafinil ယူပါ။ သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်မှာရှိသမျှလမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။ ပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်ပမာဏသာရှိသို့မဟုတ်အကြံပြုထက်ပိုရှည်အဘို့ဤဆေးဝါးမယူပါနှင့်။
Modafinil ဖြစ်နိုင်သည် အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်း။ အခြားသူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူအထူးသဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ modafinil share ဘယ်တော့မှမ။ အခြားသူတွေကမရပျနိုငျတဲ့အရပျ၌ဆေးထားပါ။ ဒီဆေးဝါးရောင်းသို့မဟုတ်ကွာပေးခြင်းပညတ်တိကမျြးဆန့်ကျင်သည်။
Modafinil များသောအားဖြင့်အလုပ်အချိန်အိပ်ပျော်ခြင်းမမှန်ဆက်ဆံဖို့အလုပ်ပြောင်းကုန်ပြီရဲ့ start မတိုင်မီနေ့ခင်းဘက်အိပ်, သို့မဟုတ် 1 နာရီကာကွယ်တားဆီးဖို့တစ်ဦးချင်းစီနံနက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
အားလုံးစိတ်ရှည်သတင်းအချက်အလက်, ဆေးဝါးလမ်းညွှန်, သင်မှထောက်ပံ့ပေးညွှန်ကြားချက်စာရွက်များကိုဖတ်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
Modafinil များသောအားဖြင့် 12 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပေးတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အိပ်ဆက်ဆံဖို့ modafinil ယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအစ (ကစဉ်ဆက်မပြတ်အပြုသဘောလေကြောင်းဖိအားနဲ့ကုသစေခြင်းငှါCPAP) စက်။ ဒီအစက်ကိုသင်အိပ်နေစဉ်ညင်ညင်သာသာသင့်ရဲ့နှာခေါင်းထဲသို့ဖိအားပေးထားတဲ့လေထုမှုတ်တဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လေထုစုပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစုပ်စက်သင်တို့အဘို့အသက်ရှူမပါဘူး, ဒါပေမယ့်အာကာသကောင်းကင်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့အင်အားအဆီးအတားကာကွယ်တားဆီးဖို့ပွင့်လင်းသင့်ရဲ့လေကြောင်းစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
modafinil ၏အသုံးပြုမှုနှင့်သောက်သုံးသောအထက်တွင်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်, နှင့် modafinil သောက်သုံးသောအထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးသန့်ရှင်းစင်ကြယ် modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီးအတူလူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကို modafinil အသုံးပြုမှုမှပေးဆောင်ရပါမည်။
4706 Views စာ
စင်ကြယ်သောအရေးအသားဝန်ဆောင်မှု04 မှာ 12 / 2018 / 5: 53 နံနက်
ဤသည်ကိုအခြို့သောအသစ်သောအချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးသောအရာတစ်ခုခု ... အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ် ...
Castybaw12 မှာ 11 / 2017 / 7: 38 နံနက်
ဌာနခွဲ12 မှာ 10 / 2017 / 12: 09 ညနေ
သင့်ရဲ့marvеlousပို့စ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါဆက်ဆက်ဖတ်ပျော်မွေ့, သင်ကအကြီးအ author.I t ကိုⲟ bookmark ကိုသင့် Blog သတိရᴡilⅼနှင့်မကြာခဏလာကြလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ပြန်ပေးပါ့မယ်။ ငါnicеတစ်ရက်ရှိသည်, ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ကြီးမြတ်အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သင့်အားencouгageချင်!
Modafinil: အရည်အသွေးမြင့် Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ	Nandrolone decanoate ဆေးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ?